Oforisuo - Wikipedia
Oforisuo yɛ bosome a ɛtɔso anan wɔ afe no mu wɔ " Gregorian" nnabupon no so.Ɛyɛ bosome a edikan a ɛwɔ nnda eduasa. Oforisuo bosome no hyɛ aseɛ ɛda pɛpɛɛpɛ te sɛ bosome kitawonsa ne ɔpɛpon bosome afe " leap year" mu. Ɛda a ɛtwa toɔ wɔ mu no ne ɛda a ɛtwa toɔ wɔ ɔp3nimma bosome wɔ afe biara mu.
Wɔ afe a ɛsɛ mu no, ɛhyɛ aseɛ wɔ ɛda a edikan wɔ nawotwe wɔ ɔpɛpon ne Ahinime bosome wɔ afe a ɛtwa mu no mo. ɛda  ɛtwa toɔ wɔ Oforisuo bosome no mu ne ɛda a 3twa toɔ wɔ kitawonsa bosome wɔ afe ɛtwa mu no yɛ pɛ.
Ɛwɔ " leap year" mu no, ɛhyɛ ase wɔ ɛda edikan wɔ nawotwe mu te sɛ kotonima bosome ne mu Wɔ afe a ɛtwa mu no mu pɛpɛɛpɛ na ɛtwa toɔ ɛda a 3twa toɔ wɔ nawotwe a ɛtwa toɔ wɔ ɔp3pon, ogyefo ne Ahinime bosome wɔ afe a ɛtwa mu no mu. next
Retrieved from "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Oforisuo&oldid=21909"
This page was last edited on 14 Oforisuo 2021, at 14:25.